Guddiga joogtada oo ka shiray ajenda u sameynta kulamada guud ee Golaha Shacabka – Kalfadhi
Guddomiyaha Shacabka BJFS Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman Iyo Guddomiye ku xigeenkiisa labaad Mudane Mahad Cawad, ayaa shir-guddoominayey kulankii afaaraad ee Guddiga Joogtada, kaas oo shalay lagu qabtay magaalada Muqdishu.
Kulanka guddiga joogtada ayaa waxa looga hadlay ajenda u sameynta kulamada guud ee Golaha Shacabka kalfadhigan lixaad inta ka harsan.
Kulanka guud haddii aanu jirin, mar walba waxaa jira kulamo ay galayaan guddiyadda joogtada ah ee golaha shacabka, sidaasi waxaa Kalfadhi u sheegay xoghayaha golaha shacabka Cabdikariim Buux.
Shuruucda ay guddiyadu ay ka soo shaqeeyaan ayaa mar-walba noqonayaa ajandaha gole weynaha Baarlamaanka.
Guddiga joogtada ee Golaha ayaa mar walba ka shira jihaynta kulan weynaha Golaha Shacabka iyaga oo marwalba ka doodaya ajendayasha la hor geyn laha kulamada Golaha iyo kor joogtaynta kulamada uu yeelanayo Golaha.